Sawiro+Akhriso Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo Ku Dhawaaqday Xamlo Dagaaleed Cusub. – Bogga Calamada.com
Sawiro+Akhriso Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo Ku Dhawaaqday Xamlo Dagaaleed Cusub.
Imaaraada Islaamiga Afghanistan ayaa ku dhaawaqday Xalmo dagaaleed cusub oo xilliga Gu’ga ah kadib bayaan rasmi ah oo kasoo baxay Hogaanka Imaarada Islaamiga.
Bayaanka ayaa lagu cadeeyay in Xamlo dagaaleedka xilliga Gu’ga loogu magacdaray Al-khandaq,waxaa Bayaanka lagu xusay in Howlgalada Xamlo dagaaleedka Al-khandaq si toos ah u bilowday Maanta oo Arbaca ah Taariikhduna ay ku beegantahay 9-ka Bisha Shacbaan ee Sanadka-1439 Hijri.
Bayaanka Imaarada ayaa lagu xusay in Xamlo dagaaleedka Xilliga Gu’ga loogu bixiyay Al-khandaq sababo dhowr ah sida xasuuqa joogtada ah ee ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka iyo kuwa daba dhilifyada u ah ku hayaan shacabka Muslimka Afghanistan xasuuqyadaasi oo ay ka mid tahay boqlaalkii Mucalimiin iyo Ardaydii barashada Quraanka Kariimka dhameysatay ee Diyaaradaha Cadowga ay ku duqeeyeen Wilaayada Qunduuz ee Waqooyga Afghanistan.
Sidoo kale Bayaanka ayaa baaq qayim ah loogu diray Shacabka Muslimiinta Afghanistan kuwaasi oo loogu baaqay iney garab istaagaan walaalahooda Mujaahidiinta ah,halka ciidamada Mujaahidiinta loogu baaqay iney iska ilaaliyaan dhibaateynta dadka shacabka Muslimka ah.
Xamlo dagaaleedka cusub ee Al-khandaq ayaa badalaya xamlo dagaaleedkii Al-mansuuriyah ee Gu’gii Sanadkii hore kaasi oo ahaa Xamlo dagaaleed si aad ah loogu naafeeyay ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka iyo kuwa maamulka daba dhilifka Kaabul.
Sidoo kale Warbaahinta Imaarada Islamiga Afghanistan ayaa baahisay Sawirada Ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta Dhaalibaan oo soo dhameystay Tababar heer sare ah,waana ciidamada loogu tala galay inta lagu guda jira howlgalka xilliga Gu’ga ee Al-khandaq iney fuliyaan weerarada isugu jirta Camaliyaatka Istish-haadiga iyo kuwa Ingimaasiga ee xoog ku galka ah.
Halkan Ka Degso Bayaanka Imaarada Oo Carabi Ah.
Halkan Ka Booqo Boga Imaarada Ee Telegram-ka.
Halkan Ka Booqa Boga Imaarada Ee twitter-ka.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirada Istish-haadiyiinta Iyo Ingimaasiyiinta Xamlo Dagaaleedka Al-khandaq.